Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Kieran Trippier Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na -egosi Full Story of Right Back Genius, onye kacha mara aha ya; “Frodo“. Anyị Kieran Trippier Child Akụkọ na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe na-eme ka ọ ghara ịma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye na-agba ọsọ azụ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị aka ole na ole n'ime ndị maara ihe banyere Kieran Trippier's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Akụkọ Kieran Trippier nke nwata - Mmalite Ndụ na Ezin’ụlọ:
Malite, aha ya bụ Kieran John Trippier. A mụrụ ya na 19th nke September 1990 nne ya, Eleanor Trippier Lomax, na nna, Chris Trippier na Bury, United Kingdom.
A mụrụ onye ọ bụla n'ime ezinụlọ dị umeala n'obi, n'ụlọ obi ụtọ Onye na-awa osisi, arborist, arboriculturist, nke dị n'okpuru.
Ọ bụghị ime ka ị gbagwoju anya; ọrụ nna ya gụnyere ịkụ, ijikwa, na ịmụ banyere osisi, ahịhịa, osisi vaịn, na osisi osisi ndị ọzọ na-eme ogologo oge.
Typedị ọrụ a n'oge ahụ adịghị akwụ ụgwọ nke ọma na maka nwoke nwere ụmụ nwoke 4. Ọ dịghịrị Chris na Eleanor mfe.
Trippier tolitere dịka nwatakịrị nwa ya na mama ya. Ọ bụ ya bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụnne ya ndị nwoke atọ; Chris, Curtis, na Kelvin. Ụmụ nwoke niile toro n'ime obodo Summerseat na Ramsbottom, Greater Manchester.
Itolite na mpaghara a na -egosi ihe egwuregwu bọọlụ. Ndị mụrụ ya, ewezuga Trippier, bụ ndị egwuregwu Manchester United niile. Eziokwu a kpụrụ ọdịnihu ya dị ka akọwara n'okpuru.
Kieran Trippier akụkọ ndụ eziokwu - Football izute:
Dịka nwatakịrị, Trippier nwere mmasị n'egwuregwu football n'oge agụmakwụkwọ ya. Otú ọ dị, nne na nna ya kwadoro echiche ha na “Mmụta ga-ebu ụzọ abịa tupu egwuregwu”.
N'ịbụ onye si n'ezinụlọ dị umeala n'obi, Trippier soro nne na nna ya chọrọ ka ha gụchaa agụmakwụkwọ elementrị tupu ha ewere bọọlụ kpọrọ ihe. N'okwu ya;
"Mgbe a na-eto eto afọ, Egwuru m ndị otu egwuregwu m, Seedfield. Ọ bụ ezigbo ndị otu egwuregwu. E nwere mmadụ ole na ole n'ime anyị bụ ndị na-egwuri egwu n'òtù ahụ niile ndị gara ụlọ akwụkwọ dị iche iche -Enwere m ihe dị ka mmadụ isii n'ime ndị egwuregwu ahụ ndị manchester scouts họpụtara. Achọpụtara m mgbe m dị ihe dị ka afọ asatọ. ”
Kieran Trippier Bio - Ọrụ Nke Oge:
N'ụzọ dị mwute, n'agbanyeghị na United Scouts na-agụ ya, Kieran esonyere Manchester United.
"Papa m chọrọ ka m gaa United n'ihi na ọ bụ nnukwu Red - ndị ezinụlọ m niile ka m bụ nwata, papa m hụrụ na m na-ekpori ndụ na Man City. ọ naghị ewute m ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ezinụlọ mily ọ bụghị Obi dị m ụtọ na m gara City na ụzọ egwu. Ha gaara enwe mmasị ịhụ m na United. ma Obi dị m ụtọ na City bụ ụzọ m si aga. ”
Otú ọ dị, Trippier họọrọ isonye na agụmakwụkwọ Manchester City ebe ọ maara enyi ole na ole ebe ahụ yana eziokwu na ọ ka bụụrụ ya obodo.
N'oge ọ na-eto eto na Manchester City, Kieran malitere dị ka onye na-eme egwuregwu etiti wee chọta ụzọ ọ ga-esi gaa n'akụkụ aka nri, tupu emesịa biri na azụ aka nri.
Ọbụna n'oge a, iwu nke ndị mụrụ ya "Mmụta nke mbụ, Tupu Football" ka guzoro. Kieran nwere ike ịchụso agụụ ya doro anya maka ịgba bọl mgbe ọ gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị Woodhey na Ramsbottom.
Ndị mụrụ ya kwere ka ọ gwakọta ma agụmakwụkwọ na football n'oge a. Trippier na -enwe ekele mgbe niile maka enyemaka nke ndị nkuzi ya na nkwado nke njikwa ụlọ akwụkwọ Woodhey onye nyere ya ikike ijikọ bọọlụ na agụmakwụkwọ.
"M nọ nso na headmaste mr, Mr. Braidley, " Kieran chetara. “Obodo na -adọpụ m n'ụlọ akwụkwọ m ụbọchị abụọ n'izu ka m gaa zụọ.
Ana m ahapụkarị Tuesday na Tọzdee ụlọ akwụkwọ, mana enwere m ekele na echere m na onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ hụrụ ihe dị n'ime m wee hapụ m ka m mee ya, yabụ enwere m ihu ọma na nke ahụ. Enwere m mmasị n'ezie n'ụlọ akwụkwọ. Mụ na ndị nkuzi nọ nso, ụmụnne m ndị nwoke atọ gakwara ebe ahụ.
"Ana m enwe mmasị n'ịme egwuregwu maka ụlọ akwụkwọ m. E nwere nnukwu ihe omume mba na Heaton Park ebe ụlọ akwụkwọ niile na-ezukọ ọnụ -Enweta m ebe dị anya. Ọbụna na nke ahụ, football bịara mbụ. "
Trippier nwere ọganihu site na nwata na-eto eto na klọb ya. Mgbe ọ na-egwu maka klọb, Trippier gụsịrị akwụkwọ na High School High School na 2007. Nke a bụ otu afọ ahụ ọ gbakọtara ọrụ Manchester United na-eto eto mgbe ọ dị afọ 17.
Trippier ghọrọ onye na-anọkarị na otu edebere aha ya mgbe ọ bịanyechara aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Manchester City na 2007. N'oge ahụ, ọ sonyekwara na ọrụ egwuregwu bọọlụ ndị ntorobịa n'agbanyeghị agbanyeghị ya na klọb ndị okenye.
Oge echefu echefu maka ya bịara mgbe ọ duuru otu ndị meriri FA Youth Cup na oge 2007-08. N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma niile a, ụjọ tụrụ. Ọ bụ akụkọ nke Manchester City Takeover.
N'etiti ọnwa Julaị 2008, akụkọ banyere iweghara Manchester City dara. Nke a butere egwu ndị egwuregwu Manchester City ọkachasị ndị nke Trippier so na ya. Ụbọchị azụmahịa ahụ mere na 4th nke August 2008.
Sheikh Mansour, otu n’ime ndị kacha baa ọgaranya nke football, nwere ezinụlọ nke ọ dịkarịa ala $ 1 puku ijeri zụtara klọb.
Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, Poor Trippier malitere ịgụta ụbọchị ya fọdụrụ na klọb ama ama na onye nwe ọhụrụ ga -agwa onye njikwa ya ka ọ gaa maka ndị okenye na ndị nwere ahụmịhe karịa ka ha na United nwee asọmpi.
Ọ bụ nne na nna Kieran Trippier gwara nwa ha nwoke ka ọ họrọ nhọrọ mbinye ego nke o mere.
Kieran Trippier akụkọ ndụ eziokwu - bilie na-ewu ewu:
Mgbe ọ tachichara enweghị nhọrọ maka ihe karịrị otu afọ nke mechara gosipụta ihe ọ tụrụ egwu na mbụ, Trippier kpebiri isonyere Barnsley na February 2010 mgbe ọ dara na ndị otu Manchester City.
The Breakthrough: Ọ gara n'ihu gosi Barnsley ihu iri anọ na otu na asọmpi niile, na-ebute ihe mgbaru ọsọ dị mkpa ma nweta nturu ugo nke onye ọkpụkpọ na-eto eto.
Nke a bụ oge ọ nwetara aha otutu -Frodo n'ihi na ọ dị ntakịrị ka o si yie Onyenwe nke Ihe Mgbaàmà ahụ.
N'ọnwa egwuregwu maka nnukwu klọb, Trippier ga-esonye na ụlọ ọrụ ọzọ, Burnley na-eburu ụzọ gbazinye tupu ya enweta azụmahịa na-adịgide adịgide. Mgbe ọ nọ na klọb ahụ, ọ nwetara mmeri nke Burnley Player nke Year (2011-2012 oge) maka nnukwu aka ya na egwu.
Onye ọzọ na-aga n'ihu na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-akpọ ya n'asọmpi Òtù PFA nke Afọ maka oge 2012-13.
Ọ natakwara otu ihe nrite ahụ oge ọzọ nke na -eduga Burnley n'ọkwa na Premier League. Nke a bụ mgbe mmasị sitere na Premiership nnukwu klọb malitere.
Na 19 June 2015, Trippier bịanyere aka na Tottenham n'okpuru njikwa Mauricio Pochettino. Ugbu a ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ndụ mmekọrịta Kieran Trippier na Charlotte Trippier:
Ụmụ okorobịa niile, n'otu oge, na -eche na ha na otu nwanyị meworo okenye na -enwe mmekọrịta.
Nke a bụ ihe gbasara Kieran Trippier na enyi nwanyị mbụ ya-nwunye ugbu a, Charlotte Trippier. Mmekọrịta ha toro site n'ọkwa enyi kacha mma ruo ezi ịhụnanya.
Di na nwunye ahụ, mgbe ha gbasịrị agbamakwụkwọ nzuzo, kpebiri ịmụ nwa. N'ikwu maka mkpebi ahụ, Kieren kwuru;
"Anọ m na-agwa ụmụ nwoke ndị ọzọ nọ ebe a nwere ụmụaka n'onwe ha ugbu a, ha agwala m otu ọ si gbanwee ndụ ha ka mụ na Charlotte nwee nnukwu obi ụtọ ịbụ nne na nna,"
Nwunye Trippier, Charlotte Trippier mụrụ nwa nke ha kpọrọ Jekọb. Ọbụna Jekọb dịka nwatakịrị bụ àgwà mara mma. Anyị na -agwa gị ihe kpatara ya na nkwupụta n'oge adịghị anya. N'okpuru ebe a, nne na nna na nwa ha nwoke na -ekpori ndụ.
N'ikwu okwu banyere ọmụmụ Jekọb n'ihe banyere nghọta nna ya, Trippier kwuru;
"Ezinụlọ m nwere ezigbo obi ụtọ n'ihi na m bụ nwa ọdụdụ m na mama m na papa m, n'ihi ya, ọ bụ ihe pụrụ iche nye ha n'eziokwu. N'ụzọ doro anya, ọ bụ ọrụ dị ukwuu nye mụ na nwunye m mana nna m dị mpako! N'ụzọ doro anya, mgbe Jekọb na-etolite, m ga - etinye bọl na ụkwụ ya ma nwee olileanya, ọ ga - achọ ịbụ ndị ịgba egwu ma ọ bụghị onye na - eme ihe ike - ma ọ bụrụ na ọ chọghị ịbụ ndị ịgba egwu mgbe ọ na - ị ga-abụ. Ma enwere m olileanya na ọ bụ.
Kieran Trippier Biography Eziokwu -Nke Jacob Mmetụta:
Kieren na ezinụlọ ya bụ ezigbo ndị enyi na ndị egwuregwu bọọlụ nọ n'ụwa. Harry Kane.
N'ikwu okwu banyere ọbụbụenyi dị otú ahụ, otu ga-eche na ụzọ kachasị mma dị n'agbata ụkwụ abụọ (Kieren na Harry).
Agbanyeghị, na -ekpe ikpe site na foto dị n'okpuru, ọbụbụenyi eke dị n'etiti Jacob Trippier (nwa Kieren) na Ivy Jane Kane (Haryada).
Ugbu a, ọbịbịa na-abịa: Jekọb Jekọtara kwuru na ọ bụ nwa ama ama ma e jiri ya tụnyere ụmụaka ndị egwuregwu Tottenham na ndị egwuregwu Premier League n'ozuzu ya.
Nke a bụ n'ihi na ya ejirila ọtụtụ narị tweet na -eme ihe n'ịntanetị, na -eme ka nna ya bụrụ onye a ma ama.
Omume ahụ malitere mgbe Trippier ketara otu n'ime foto ya Mauricio Pochettino n'ọhịa na Lane mgbe egwuregwu gachara.
N'ụzọ na -awụ akpata oyi n'ahụ, nwa obere nwa nke Trippier Jekọb yiri ka ọ nwere mmasị dị ukwuu maka onye njikwa. Jekọb nyere onye isi nna ya nlele dị oke ọnụ dị ka a na -ahụ na foto dị n'okpuru.
Trippier mere ihe nwa ya nwoke kwuru;
“Ee, ọtụtụ ndị na-tweeting m banyere nke ahụ. Ọbụna onye njikwa ahụ RETWeeTED HIMSELF, nwere obere banter. ”
Ndụ Kieran Trippier:
Kieran Trippier nwere obi ekele maka nne na nna ya maka àjà ha mere iji nyere ya aka iru ọnụ ọgụgụ ọrụ ya. N'ịbụ onye si n'ezinụlọ dara ogbenye, ọ na-esiri ndị mụrụ ya ike mgbe Trippier dị obere.
N'oge ahụ, ọ bụ Trippier na ụmụnne ya bụ ụbọchị asaa n'izu na-akwụsịghị; Chris, Curtis, na Kelvin.
Nwanne ya nwoke nke okenye, Kevin bụ onye aha nne ya maara Lomax. Kevin dị ka nwanne ya nwoke mechara bụrụ ndị egwuregwu bọọlụ.
N'okpuru ebe a bụ ụmụnne nwoke abụọ nwere obere aha n'ihi na ha nwere ike ịbụ ndị nna dị iche iche.
Kevin enwere ezigbo ọrụ na Football League na-amasị Oldham na Rochdale. Ọ bụ onye na-agbachitere site na ịzụ ahịa football na afọ anọ tọọ aka nwanne ya nwoke, bụ Kieren. Ụmụnna ndị ọzọ emeghị ya n'egwuregwu football.
N'otu oge, Kieren Tripper na -elegara Kelvin anya na ịgbaso nzọụkwụ ya dị ka onye egwuregwu bọọlụ mana nnukwu otuto na -aga nne na nna ya maka inyere ha aka.
N'oge ahụ, na nke ọzọ iji kpuchie mmefu/ọnụ ahịa ọzụzụ, nne na nna abụọ ga -ahapụ Trippier ka ọ zụọ na Mọnde, Kevin Tuesday, Trippier Wednesday, Kevin Thursday, Trippier Saturday na n'ikpeazụ, Kevin na Sọnde.
N'oge ahụ, nna Kieren Tripper na -arụ ọrụ oge niile na Scotland, na -anwa ị nweta ego dị ka dọkịta osisi.
Na njedebe nke ụbọchị, ọ nwere ike nweta obere ego maka ụmụ nwoke ọbụlagodi mgbe nwunye ya (nne Kieren Trippier) nyere onyinye.
Ego ahụ zuru ezu iji nye nkwado maka ụmụ nwoke ahụ yana gbakwunye, zụta akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, shinguards na mmanụ ala.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Kieran Trippier Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.